Antony 10 Maninona ny orinasa madinidinika no tsy afaka miraharaha ny haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Talata, Janoary 28, 2014 Alatsinainy Janoary 27, 2014 Douglas Karr
Jason Squires dia nametraka lisitra feno fandinihana Antony 10 maninona ny orinasa kely tsy afaka tsy miraharaha ny media sosialy. Manome ny porofo rehetra ilain'ny orinasa madinidinika izany raha mbola liana izy ireo na tsia handray antsitrika. Hataoko ambanin'ny antony roa tena voafaritra ihany ireo rehetra ireo, na izany aza:
Ny mpiara-miasa aminao, ny vinavinanao ary ny mpanjifanao dia eo izao. Eo ve ianao rehefa mila vonjy izy ireo? Manoro hevitra azy ireo amin'ny varotra manaraka ve ianao?
Mety tsy ho eo ny fifaninanana ataonao! Betsaka ny olona no mampiasa izany ho fialan-tsiny… tsy misy na iza na iza ao amin'ny indostria misy antsika ao amin'ny media sosialy. Wow… fotoana mahafinaritra tokoa ho anao ny hamboly ny sainanao amin'ny tany! Inona no andrasanao? Hanomboka ny fifaninananao?
Fampisehoana, fankatoavana, tsy fivadihana… ireo rehetra ireo dia antony iray handresena ireo olan'ny fitokisana. Ny fametrahana ny toetranao sy ny olonao eo alohan'ny orinasanao fa tsy ny miafina ao ambadiky ny marikao no mahatonga anao marefo. Toa ratsy izany, saingy tsia. Te hiara-hiasa amin'ny olona ny olona - tsy ny logo!
Lahatsary: ​​The Art of Data Visualization
Jan 31, 2014 ao amin'ny 7: 29 AM
hey! nahazo hevitra tsara avy amin'ny bilaoginao cz mitantana orinasa kely aho ary mieritreritra ny hampiroborobo amin'ny Internet. Ankehitriny dia hataoko tokoa miaraka amin'ny fanampian'ny lahatsoratrao. 🙂
1 Feb 2014 tamin'ny 3:34 maraina
Nanaraka ny Lalàn'ny Media Sosialy rehetra ho an'ny orinasa madinika izahay ary TSY MISY niasa araka ny nambaran'ny Gurus Social Media - Izany rehetra izany dia hype ary TSY 100% antoka ny fahombiazana. TSY nanana GENERATION LEAD izahay, TSY MISY FIVORIANA ary tsy nisy nandramanay nampandroso ny orinasa. Saingy nandany vola be momba ny varotra izahay. Ary aza milaza aminay fa tsy nety ny nataonay rehetra satria tsy nanao izany izahay – Facebook, Twitter, Pinterest, Blog ary Tranonkala … Matihanina momba ny varotra izahay ary nanandrana ny Gurus rehetra; toro-hevitra…Hetsika rehetra izany.
Febroary 2, 2014 amin'ny 6:09 PM
@anthonysmithchaigneau:disqus TSY mahazatra ny vokatrao ary tsy hiteny mihitsy aho hoe “diso ny nataonao”. Raha manohy mamaky ny bilaoginay ianao, dia ho hitanao hoe aiza no nihemotra tamin'ny 'gurus'. Izany no antony anoloranay fifantohana amin'ny fantsona maro fa tsy ara-tsosialy fotsiny. Ny indostria sasany dia tsy mbola eo, misy ny vondrom-piarahamonina tsy misy, ary indraindray dia tsy mifanaraka amin'ny kolontsaina fotsiny izany. Heveriko fa mampihomehy foana ny fomba ahazoan'ireo mpanolo-tsaina media sosialy vokatra tsara… toy ny mpisolovava miaro mpisolovava izany 🙂 Mazava ho azy fa mahazo vokatra tsara ireo 'gurus' amin'izany… izany no iveloman'izy ireo. Tsy ny indostria rehetra anefa no mitovy!
Mino koa aho fa izany no antony, tamin'ny fitsapan-kevitra ara-barotra tamin'ny taona 2013, ireo mpivarotra dia nitodika tany amin'ny marketing mailaka ho paikady voalohany. Tianay ny haino aman-jery sosialy ampiasaina ho 'ako' sy fampiroboroboana ny atiny - saingy mbola miantehitra amin'ny fantsona hafa toy ny fikarohana, mailaka, dokam-barotra ary eny fa na dia ny ezaka avy any ivelany aza. Misaotra anao nandray anjara tamin'ny resaka!
Jan 7, 2016 ao amin'ny 5: 08 AM
Valiny tony tsara avy amin'i Douglas ho an'i Anthony.
14 Okt 2016 amin'ny 6:19 PM
Antony tsara sasany handehanana amin'ny media sosialy! Sarotra tamiko ny nahita votoaty havoaka raha tsy nilaza tamiko ny namako hoe hampiasa Capzool, manana lahatsoratra efa vita ho an'ny orinasako manokana izy ireo, ary hahazo bebe kokoa rehefa mangataka izany aho. Misy koa ny kalandrie fanolorana izay manome ahy lahatsoratra ho an'ny andro isan-taona. Manoro hevitra ny rehetra aho hampiasa izany!